Multilayer PCB - KingSong PCB နည်းပညာ, Ltd
image: ဗဓေလသစ်နှင့်အတူပလပ် impedance ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Holes နှင့်အတူ 10 Layer PCB တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့
Multilayer PCB is the circuit board with more than two layers, such as4layers,6layers, 8 layers, 10 layers etc. It is double-sided multiple. And with common features as more than two layers conductive traces, separated by insulating material between the layers, and the layer between the conductive traces must connected through drilling, lamination as required. Multilayer PCB board Multi-layer ကိုကူးမှုဝါယာကြိုး, မြင့်သောသိပ်သည်းဆတူးဖော်ခြင်းနှငျ့အတူရှိ၏။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုသည်။
image: ကပုံမှန် Multilayer (10 Layer) PCB Stack Up ကိုဖွင့်
ultra Fine အသံ (3mil / 3mil)
အသေးစား Hole Drilling, လေဆာ Drilling
လူပျိုနှင့် Differential ထိန်းချုပ်ထား impedance
halogen အခမဲ့, အနိမ့်ဆုံးရှုံးမှု, Ultra-ပါးလွှာ, ရောထွေး packages များ
အဆိုပါ PCB အရည်အသွေးကိုအာမခံချက်အသုံးပြုတဲ့ကြေးနီဝတ်ဖျင် (CCL) မှစတင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံပြီးဆုံး circuit ကို board.Pls ၏တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်သေချာစေရန်ဤကဲ့သို့သော Multi-layer ကို PCB ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Kingboard, Shengyi, ITEQ အဖြစ်ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်စာရွက်ပေးသွင်းရှေးခယျြကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့မြင် PCB ဘုတ်အဖွဲ့ကုန်ကြမ်းဂိုဒေါင် :